बाइबल अर्थ प्रकाशनका चार चाबी सिद्धान्तहरू – Word of Truth, Nepal
२ तिमोथी २:१६ मा “अशुद्ध र व्यर्थका बकबक” भन्ने वाक्यांशलाई विचार गर्नुहोस्। यसको माने के हो? हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ। त्यसबाट हामीले के सिक्छौं भने “अशुद्ध र व्यर्थका बकबक” भनेको ती कुरा हुन् (१) जो खाँटी शिक्षाको विपरित छन् (पद १६, १८), (२) जसले गडबड र खराब फल फलाउँछन् (पद १६), र (३) जो ख्रीष्टियन जीवनका लागि हानिकारक छन् (पद १७)।
तीतस ३:९ मा “मूर्खतापूर्ण विवादहरू” (foolish questions) भन्ने वाक्यांशलाई विचार गर्नुहोस्। यसको माने के हो? फेरि, सन्दर्भले नै वाक्यांशलाई परिभाषित गर्दछ। मूर्खतापूर्ण विवादहरू (अथवा “मूर्ख प्रश्न”) ती हुन् (१) जसले झगडा उत्पन्न गराउँछन् (पद ९), (२) जो बेफाइदाका हुन्छन् (पद ९), र (३) जसलाई झूटा शिक्षकहरूले प्रयोग गर्दछन् (पद १०)।
२ पत्रुस १:२० को “पवित्रशास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी आफ्नो निजी व्याख्याबाट भएको होइन” भन्ने वाक्यलाई विचार गर्नुहोस्। व्याखाकारहरूले यसलाई विभिन्न तरिकाले अर्थ लगाउने गर्छन्, तर यसको माने त यसपछिको पदमा प्रस्टै दिइएको छ। यसको माने यो हो, बाइबलका मानवीय लेखकहरूले लेखेका शब्दहरू उनीहरूको आफ्नै रचना थिएनन्, तर उनीहरूले जे लेखे ती पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरूलाई दिइएका थिए।
२ तिमोथी ३:१७ को “सिद्ध” भन्ने शब्दलाई विचार गर्नुहोस्। के यसको माने पापरहित हुनु भनेको हो? होइन, यस शब्दलाई उक्त पदमै परिभाषित गरिएको छ। यसको माने हो, “हरेक असल कामका लागि पूर्णरूपले सुसज्जित हुनु”। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई पूर्णरूपले सुसज्जित हुनु भन्ने अर्थमा सिद्ध हुनु भन्ने कुरालाई जनाइँदैछ यहाँ।
खाँटी शिक्षा निर्माण गर्नलाई लेखोटलाई लेखोटसित दाँज्नु अनिर्वार्य छ। यदि लेखोटलाई पृथकरूपमा अर्थ लगाइन्छ भने, यसको नतीजा भनेको प्रायः गलत व्याख्या नै हुन्छ। झूटा शिक्षकहरू पदहरूलाई पृथकीकरण गर्न खूब रूचाउँछन्। आर्थर टी पियर्सन (Arthur T. Pierson) ले यो बुद्धिमानी चेताउनी दिए: “पवित्रशास्त्रको अध्ययनमा गरिने कुनै पनि खोजीले, चाहे खण्ड-खण्डमा होस् चाहे पद-पदमा, जतिसुकै महत्त्वपूर्ण त्यो किन नहोस्, पवित्रशास्त्रको सिङ्गो गवाही (united witness) को सर्वोपरि महत्त्वको अर्थलाई ह्रास गह्राउने काम गर्न मिल्दैन। हरेक खराब शिक्षा वा अभ्यासले पृथक खण्डहरूबाट सतही रूपमा आफ्नो समर्थन जुटाउने काम गरिरहेको हुन्छ; तर जब पवित्रशास्त्रको सिङ्गो, एकै स्वरको गवाहीलाई त्यसको विरुद्धमा लेखाजोखा गर्ने काम गरिन्छ, तब परमेश्वरको वचनबाट कुनै पनि त्रुटीपूर्ण वा हानिकारक कुरा निस्की आउँदैन। सत्यताको आंशिक खोजीले आंशिक बुझाइ ल्याउँछ जो स्वभावैले असिद्ध हुन्छ; ध्यानपूर्वक गरिएको तुलनाले मात्र परमेश्वरको सिङ्गो मनलाई प्रकट गर्नेछ।”
उदाहरणको लागि, १ कोरिन्थी ९:२२ मा पावल भन्छन्, “कुनै न कुनै प्रकारले कतिलाई बचाउन सकूँ भनेर म सबै मानिसहरूलाई निम्ति सबै थोक भइदिएँ”। यसलाई यदि बाँकी पवित्रशास्त्रदेखि पृथक गरियो भने कसैले यस्तो मानिलिन सक्छ कि पावल हराएकाहरूका निम्ति जे-जस्तो गर्न पनि तयार थिए यहाँसम्म कि उनीहरूको जीवनशैली अपनाउन समेत। आजका “रक एण्ड रोल ख्रीष्टियनहरू” (rock ‘n’ roll Christians) को माझमा यो शिक्षा लोकप्रिय बेनको छ। तर जब लेखोटलाई लेखोटसित दाँजिन्छ, पावलको तात्पर्य यो थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। जस्तै, गलाती ५:१३ मा पावलले भने, “किनभने भाइहरूहो, स्वतन्त्रताका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका छौ; तर यति होस् — यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एक‍-अर्काको सेवा गर”। यसर्थ, पावलको स्वतन्त्रता भनेको शरीरको सेवा कुनै पनि हिसाबले नगर्ने स्वतन्त्रता थियो। जस्तै, उनले आफूसँग सेवाकार्य गरिरहेका कुनै पनि ख्रीष्टियन स्त्रीहरूलाई कस्सिएको एकलिङ्गी (unisex) शैलीका अभद्र पोशाक पहिरन कहिल्यै दिनेवाला थिएनन्, जब कि आजको ख्रीष्टियन रक प्रेमीहरूले लगाउँछन्। साथै पावलले विश्वासीहरूलाई “दुष्टताको हरेक रूपबाट अलग बस” (१ थेस्सलोनिकी ५:२२) भन्दै सिकाए। यो भनेको त अलगपनताको सबैभन्दा साँघुरो खाले अभ्यास हो अनि पावलले आफ्नो जीवन र सेवाकार्यमा यसको विपरित कुनै पनि कुरा अवश्य गर्दैनथे। जस्तो कि, उनले लामो कपाल अवश्य पाल्दैनथे किनकि बाइबलले बताउँछ कि यो शर्मको कुरा हो र त्यसैले त्यसो गर्नु त खराबीको रूप अपनाउनु हुन्थ्यो (१ कोरिन्थी ११:१४)। यसरी पवित्र आत्माको अगुवाइमा लेखोटलाई लेखोटसित तुलना गरेर हामी बाइबललाई ठीक-ठीक अर्थ लगाउन सक्छौं र खाँटी शिक्षा जान्न सक्छौं।
लूका १४:२६ लाई विचार गर्नुहोस्, “कोही मानिस मकहाँ आउँछ र आफ्ना बाबु, आमा, स्वास्नी, छोरा‍-छोरीहरू, दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई, अँ र आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गर्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन।” आफ्नै प्रियजनहरूलाई “घृणा” गर्नुको माने के हो? यसलाई यसको समानन्तर खण्ड मत्ती १०:३७ मा खुलाइएको छ, “जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ, त्यो मेरो योग्यको छैन; अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ, त्यो मेरो योग्यको छैन।” यसको माने यो हो कि हामीले ख्रीष्टलाई अरू कसैलाई भन्दा धेरै बढी प्रेम गर्नुपर्छ र सबै कुरामा उहाँको आज्ञा मान्नुपर्छ।
जस्तै, सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टहरूले उनीहरूको “प्राण-स्वाप” को शिक्षालाई पुरानो नियमका थोरै पदहरूको आधारमा निर्माण गर्दछन्। जस्तै, उनीहरू अय्यूब २७:३ लाई औंल्याउँछन् जहाँ सासलाई आत्मा भनिएको छ। उनीहरू तब भन्छन् कि सासचाहिँ आत्मा भएको हुनाले, मान्छे मरेपछि पनि रहिरने आत्मा ऊसँग हुन सक्दैन। यसैले जब मान्छे मर्छ ऊ मरेर जान्छ र बौरिउठाइ नभएसम्म उसको अस्तित्व नै हुँदैन। तर जब हामी अन्य पदहरूको स्पष्ट शिक्षालाई हेर्छौं, तब मान्छे एक त्रिपक्षीय प्राणी हो भन्ने देख्छौं (आत्मा, प्राण र शरीर) र मान्छेको आत्मा उसको मृत्यु भएपछि बाँचिरहन्छ। १ थेस्सलोनिकी ५:२३ लाई याकूब २:२६ सित तुलना गर्नुहोस्। सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टहरूले साथै उपदेशक ९:५ लाई प्रयोग गर्दछन् जहाँ “मरेकाहरूले केही जान्दैनन्” भनिएको छ। उनीहरू दाबी गर्छन् कि यसले मरेकाहरू बौरिउठाइ नभएसम्म चिहानमा सुतिरहन्छन् भन्ने उनीहरूको शिक्षाको समर्थन गर्दछ, तर उनीहरू बाँकी बाइबललाई बेवास्ता गर्दछन् जहाँ मरेकाहरू चेतनामै हुन्छन् भन्ने कुरा सिकाइएको छ। जस्तै लूका ९:२८-३३; १ थेस्सलोनिकी ४:१४; र प्रकाश ६:९-११।
डाक्टर डेविड कूपर (Dr. David Cooper) ले भने, “जब पवित्रशास्त्रको सामान्य अर्थ नै अर्थपूर्ण छ, अन्य अर्थ नखोज्नुहोस्, र शब्दलाई अक्षरशः अर्थमा लिन नमिल्ने स्पष्ट सङ्केत सम्बन्धित सन्दर्भका तथ्यहरूले नदेखाएसम्म हरेक शब्दलाई त्यसको अक्षरशः अर्थमै लिनुहोस्।”
भज २२:१ — क्रूसमा येशूले उच्चारण गर्नुभएका शब्दहरू (मत्ती २७:४६)
भज २२:६-८, १२-१३ — मानिसहरूले येशूलाई गिल्ला गरे (मत्ती २७:३९-४४)
भज २२:११ — उहाँलाई गोहार गर्ने कोही थिएन (मर्कूस १४:५०; हिब्रू १:३)
भज २२:१४-१६ — तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे (मत्ती २७:३५)
भज २२:१७क — तिनीहरूले उहाँका हड्डीहरू भाँचेनन् (यूहन्ना १९:३३)
भज २२:१७ख — तिनीहरूले उहाँलाई आँखा तरेर हेरे (मत्ती २७:३६)
भज २२:१८ — तिनीहरूले उहाँका वस्त्रका लागि जुवा खेले (मत्ती २७:३५; यूहन्ना १९:२४)
जस्तै, जेनेभा बाइबल (Geneva Bible) को प्रकाश ९:११ को टिप्पणीले “अथाह कुण्डको दूत” को माने “ख्रीष्टविरोधी पोप, कपटीहरूको राजा र शैतानको दूत” हो भन्दछ। तर अथाह कुण्डको दूत भनेको अक्षरशः एक पतित स्वर्गदूत र एउटा अक्षरशः अथाह कुण्ड बाहेक अन्य कुनै कुरा हुनुपर्छ भनेर बुझिनुपर्ने त्यहाँ कुनै कारणै छैन।
नयाँ युगीहरू (New Agers) ले पनि बाइबललाई लाक्षणिक वा “आत्मिक” तरिकाले अर्थ्याउँछन्। लेवी डाउलिङ्ग (Levi Dowling) ले द अक्वेरीयन गस्पल अफ जिजस द क्राइस्ट (The Acquarian Gospel of Jesus the Christ) मा भन्छन् कि लूका २२:१० मा पानीको गाग्रो बोक्ने मान्छेले अक्वेरीयसको युगको आगमनलाई सङ्केत गर्दछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 16:33:522020-11-13 16:07:00बाइबल अर्थ प्रकाशनका चार चाबी सिद्धान्तहरू
दैनिक बाइबल अध्ययनआधारात्मक बाइबल शब्दावली १